Rivo Rakotovao : Lany ho filohan’ny SENAT -
AccueilRaharaham-pirenenaRivo Rakotovao : Lany ho filohan’ny SENAT
Taorian’ny fanambaran’ny filohan’ny antenimieran-doholona teo, Honoré Rakotomanana, izay filoha teo aloha, ny amin’ny tsy fahefany intsony hanatanteraka ny andraikitra ny maha lehiben’ ity andrim-panjakana ity intsony azy, dia nanapa-kevitra avy hatrany ireo mpikambana eo anivon’ ny antenimieran-doholona, hanatanteraka fifidianana izay handimby azy. Tokana ihany koa moa ny kandida izay nametraka ny filatsahan-kofidiana sy natolotry ny antoko, dia tsy iza izany fa Rivo Rakotovao. Nandritra ny fifidianana izay notontosaina, dia miisa 56 ireo mpikambana eo anivon’ ny antenimieran-doholona no tonga nifidy, ary ny vato 52 amin’ ireo dia nifidy sy nandany ny filohan’ny antenimieran-doholona vaovao avokoa, dia i Rivo Rakotovao izany. Nisy hatrany moa ny fanontaniana izay napetraky ny loholona paulbert mahakasika ny anton’ny fametraham-pialan’ny filohan’ny antenimieran-doholona teo aloha eo amin’ny toerany izao , saingy tsotra ny valinteny izay nomen’ity farany “efa namadika ny ho ambarako eto amin’ity androany ity ny tenako, ary izay no navalin’ny feon’ny fieritreretako’’ hoy hatrany i Honoré Rakotomanana.
Raha nandray ny fanapahan-kevitra amin’ny tsy fahefana intsony miandraikitra ny filohan’ny antenimieran-doholona i Honoré Rakotomanana, dia samy nanaiky izany avokoa ireo senatera tonga nanatrika ny fotoana. Ho azy ireo rahateo dia fanapahan-kevitra manokana avy aminy no noraisiny, saingy ny raharaham-pirenena kosa dia tokony mandeha hatrany. Anton’ny nanatanterahana avy hatrany ny fifidianana izay ho solony. Ankehitriny tokoa mantsy dia ao anatin’ny fivoriambe ara-potoana faharoa anatin’ny taona ireo andrim-panjakana mpanao lalàna roa, ary zava-dehibe no dinihina, ka ilaina mpitarika izany. Ny tetibolam-panjakana, izay iankinan’ny ain-dehiben’ny firenena, ary tokony hotanterahina ny adidy izay andrasan’ny vahoaka azy ireo hoy ny mpikambana, izay nanontaniana manoloana ny fahitan’izy ireo ny zava-misy. Vory lanona avokoa moa ny rehetra nandritra ny fotoana nanaovan’ny filoha teo aloha ity fanambarana ity,tonga nanotrona izany, ary navitrika dia navitrika tokoa, na ny mpiasan’ny antenimieran-dolona azy.
Nivoaka tamin’ny fahanginany ny filoha nasionalin’ny antoko MFM, Manandafy Rakotonirina. Manoloana ny zava-nitranga tamin’ny fankalazana ny faha-15 taona nijoroan’ny antoko Tiako i Madagasikara na Tim, ny 8 jolay teo, ary niteraka fikorontanana sy savorovoro noho ...Tohiny